” सेक्स प्रस्ताब राख्ने आँट कसैले पनि गर्न सकेनन्”:- गायिका देविका के.सी. – Enepal Khabar
२६ माघ काठमाण्डौ- सानै देखि नाच्ने मादल बजाउने र गीत गाउने गरे पनि “घर त नुवाकोट ” गीत रेकर्ड गराएर २०५९ साल देखि औपचारिक रूपमा लोक दोहोरी क्षेत्रमा प्रबेश गरेकी अहिलेकी चर्चित र अत्यन्तै ब्यस्त गायीका जस्ले आज सम्म ४ सय जती गीतमा आफ्नो सुमधुर आवाज दिइसकेकी छिन ! ईनेपाल खबर संस्थापक राजन क्षेत्रीको सहयोगमा उनै लोक दोहोरी गायीका देविका के.सी.संग सम्बाददाता तिलक बोहराले लिएको अन्तर्वार्ता यहाँहरूका लागि !
१) देबिका जी सांगितीक क्षेत्रमा कहिले देखि लाग्नु भयो ?
– सांगितीक क्षेत्रमा औपचारिक प्रबेश २०५९ साल देखि गरेकी हुं !
२)यहाँको पहिलो गीत ?के कुराले तान्यो र लोक दोहोरी क्षेत्रमा लाग्नु भयो?
– मेरो आवाजमा पहिलो गीत ” घर त नुवाकोट ” बोलको थियो। त्यतिबेला एक्दम चलेको गीत, म मा सानै देखि गाउने नाच्ने अनि मादल बजाउने कला थियो त्यसैलाई कलेज लाइफ संग-सगै ब्यबसायीक रुपमा परिणत गरेकी हुं।
३) कला भएर मात्र अगाडि बढ्न गार्हो छ भन्छन नि ? हजुरलाई त्यस्तो गार्हो भएन ?
– अहिले जस्तो सजिलो पहिले पटक्कै थिएन । अहिले त तीन टुक्काको गीत गाएर युट्युबमा सार्वजनिक गर्यो कति आनन्द ! पहिले त एक्दम गार्हो थियो , भ्वाइस पास गरेर आउन पर्थ्यो,एल्बम मा गीत गाउन र क्यासेट कम्पनी ले पत्याउन पनि गार्हो थियो ! मैले पनि सामना गरेर नै आएकी हुं!
४)क्यासेट कम्पनिले नपत्याएर भौंतारीनु त परेन हजुरलाई?
-त्यति सार्है त परेन तर त्यो बेला नयाँ लाई गाह्रो नै थियो , बिमा दिज्यु लक्ष्मी दिज्यु शर्मिला दिज्यु , सीता थापा दिज्यु हरु नै चल्नु भएको थियो .. नयाँहरुलाई स्थान कम्ती नै दिइन्थ्यो , मलाइ एल्बममा गाउने पहिलो मौका आदरणीय दिज्यु सीता थापाले दिनु भएको थियो ।
५)तपाईंको सफलताको पछाडी कस्को हात छ ?
– म यो क्षेत्रमा आफ्नै खुबिले आएकी हुँ, मलाई मेरो परिवारको पुरै साथ थियो! विशेष मेरो बुवाले धेरै माया तथा हौसला दिनु हुन्थ्यो! केही क्षमता आफु मै हुन पर्छ अनि मात्र सफलता मिल्ने गर्दछ जुन कुनै क्षेत्रमा पनि,
६)भने पछि सफल हुनुमा परिबारको ठुलो हात छ, यसको श्रेय परिवारलाई दिनुहुन्छ है न त?
– हो, परिवार संगै सम्पूर्ण दर्शक श्रोता अनि सम्पूर्ण मिडियालाई दिन्छु जस्ले गायिका देबिका भनेर चिनाउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नु भएको छ!
७) लोक दोहोरी मै लागेर जीवन धान्न सकिन्छ?
– सकिन्छ पनि र सकिँदैन पनि, सकिन्छ यो अर्थमा ,यो क्षेत्र बुझेर सिकेर लगनशील भै लाग्ने लाई छिटो परिणाम नदेखिए पनि भबिस्य राम्रो छ , सकिदैन यो अर्थमा – लहै लहैमा सस्तो लोकप्रियताको लागि आउनु हुनेलाई क्षणिक मात्र टिक्न सजिलो होला.. फेरि अहिले कलाकारहरु धानिने माध्येम स्टेज शो नै एक मात्र बलियो आधार भएको छ , र व्यावसायिक गायक गायिकालाई अलि सजिलो छ रेकर्डिङमा पनि ब्यस्त हुनुहुन्छ।
८) यो क्षेत्रमा अगाडी बढ्न र टिक्नको लागि आयोजक, बिभीन्न अग्रजहरू संग शारीरिक सम्बन्ध देखि लिएर अन्य हल्ला सुनिन्छ कति पय लह लहैमा लागेर आएकाहरू त्यस्तो हर्कत गरेर अगाडि बढेका छन भनेर।के यो सत्य हो ?
– हल्ला कतिपय हल्लै मात्र होलान , बिकृती बिसंगति जुन सुकै छेत्रमा पनि हुन्छ नै , लोक दोहोरी गीत मा पनि छैन भन्न सक्दिन ! त्यसरी सस्तो लोक प्रियताको लागि आउनु भएको छ भने आफुलाई र आफ्नो कलालाई चिन्नुहोस र बाटो मोड्नुहोस भन्न चाहन्छु। त्यसरी अगाडि बढ्दा क्षणिक फाईदा होला दीर्घकालीन हैन !
९) भने पछि उहाँहरूलाई यो हजुरको सुझाब ?
-म पनि यो क्षेत्रमा सिक्दै र जान्ने क्रम मै छु , आफुलाई निखार्ने कोसिस गर्दै छु, १५/१६ बर्ष यो क्षेत्रमा आफुलाई समर्पित गरिसकेको छु , यस आधारमा भन्नू पर्दा उँहरूलाई मेरो सुझाव हो !
१०) हजुरलाई आयोजकहरू बाट कहिल्यै यस्तो प्रश्ताब त आएको छैन नि?
– सायद सबै जसो कुराहरु ब्यक्ति बिशेषमा पनि निहित हुन्छन होला , म आफुलाइ अनुशासित तवरले अगाडि बढाइरहेकी छु, कोहि कसैले त्यस्तो गलत नियत ले हेर्ने हिम्मत नै गर्दैनन्।
११)मिठो स्वर शुन्दर मुहार भएकी गायीकालाई देखेर लठ्ठै हुनेहरू त धेरै होलान नी है? यहाँलाई प्रेम प्रश्ताब कत्तिको आउछ?
– राम्रो फूल फुल्नु प्रकृतिको पनि सुन्दरता हो … हामी यहि प्रकृतिको एक छटा हौं , सुन्दर चिजहरु हेर्नकै लागि हुन … निमोठ्न भएन नि। प्रेम प्रस्ताव आउँथे र आउँछन पनि त्यसलाई दर्शक श्रोताको माया र मेरो कला गलाको सम्मान ठान्दछु! कुनै नयाँ कुरा र नराम्रो लाग्दैन ।
१२)शुन्दर फूल निमोठ्न नभए पनि स्पर्श गर्न नी ? स्पर्श गर्ने आँट कसैले गरेनन?
– हाहा अट्टाहस हाँसो सहित , स्पर्श गर्ने आँट गरे नी किन नगर्नु ? मेरो बिहे भैसक्यो ……..,
१३)भने पछि जीबनको राजकुमार बाहेक अरू कसैको केही चलेन ?
– बास्तबमा जन्म मृत्यु … विवाह माथी बाट नै फिक्स भएको होला जस्तो लाग्छ , जुन संस्कार मैले पाएकी छु त्यसले पनि मलाई सहि मार्ग पहिल्याउन सिकायो , गलत तर्फ ध्यान गएन र कहिल्यै नजाओस पनि !
१४)यो क्षेत्र आफैमा रमाईलो क्षेत्र तर पनि यस क्षेत्रमा लागे पछिको त्यस्तो भुल्नै नसकिने रमाईलो र दूःखद कुनै एउटा पल ?
-यो क्षेत्रले मलाई गायिका देबिका के. सी. भनेर आम दर्शक श्रोता माझ चिनायो यहि नै भुल्न नसकिने सुखद पाटो हो, लामो सफर मा आरोह अबरोह त चलिनै रहन्छन , सुख दू:खका पल हरु धेरै नै छन .. ती मध्य पनि संकट कालको बेला – रास्ट्रीय लोक दोहोरी गीत प्रतिस्ठान नेपाल को तर्फबाट हाम्रो धनगढी प्रोग्राम थियो , बन्द तथा एम्बुस को कारण ३/४ दिन गाडिमै दिन रात बस्नु परेको दू:खद क्षेण म भुल्नै सक्दिन!
१५)यस क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ कलाकार भाई बहिनीहरूलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
– आफू संग कलागला इमान्दारीता र लगनशीलता छ भने पक्कै यो क्षेत्रमा जम्न सकिन्छ आउनुहोस स्वागत छ,आउनुहोस लोक संस्कृतिको संरक्षण गर्नुहोस सफलताको शुभकामना पनि छ !
१६) अन्त्यमा eनेपाल खबरका पाठक तथा हजुरका लाखौं लाख दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
–इ नेपाल खबरका सम्पूर्ण देश बिदेश मा रहनु भएको पाठक ज्यु हरु प्रती आभारी छु मेरो जीवन कथा पढिदिनु भयो … इ नेपाल खबर परिवार तथा लाखौं लाख मेरा शुभचिन्तक ज्यु हरुलाइ हार्दिक धन्यवाद !! अब केहि दिनमा मेरो रोईला गीत आउँदै छ पहिले जसरी यो गीतलाई पनि माया गरिदीनुहोला भन्न चाहन्छु ! सम्पुर्णलाई आउँदै गरेको नयाँ बर्ष २०७५ को अग्रीम शुभकामना !
१७)अत्यन्तै ब्यस्तताका कारण पनि हामीलाई समय दिनु भएकोमा ह्दय देखि नै धन्यवाद !
– गीत संगित,जीवन र भोगाईका धेरै कुराहरू मेरा श्रोता र दर्शकका लागि राख्ने अबसर दिनु भएकोमा eनेपाल खबर परिवार र बिशेष गरी तिलक जी हजुरलाई धन्यवाद !
२६ माघ २०७४, शुक्रबार ०७:५५ मा प्रकाशित